June 19, 2019 - Update New
ရောဂါရှိသူက စကားပြောရင် (၃)ပေ ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးရင် (၆)ပေအထိ ရောက်နိုင်တဲ့ H1N1 ရောဂါပိုးအကြောင်း
June 19, 2019 Naing 0
ရောဂါရှိသူက စကားပြောရင် (၃)ပေ ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးရင် (၆)ပေအထိ ရောက်နိုင်တဲ့ H1N1 ရောဂါပိုးအကြောင်း ဘတ်စ်ကားစီးရသူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကားကျပ်ကျပ်စီးရချိန်မှာ H1N1 တုပ်ကွေးပိုး ကူးစက်မှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဘယ်လို ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်တယ်ဆိုတာလေး ပြောပေးပါဦး ဆရာ။ အရေးကြီးတာက H1N1 ပိုးရှိသူပါပဲ။ […]
H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦး ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဌာန အတည်ပြု
H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦး ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဌာန အတည်ပြု ဇွန် ၁၄ ရက်မှ ၁၉ ရက်နေ့အထိ ပြင်းထန်အဖျားရောဂါ H1N1 ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦးအထိရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွင် ယနေ့ (ဇွန် ၁၉ […]
အသည်းကွဲနေသူတွေကို မျက်ရည်မခိုင်ဖြစ်သွားစေတဲ့ နီနီခင်ဇော်ရဲ့သီချင်းအသစ်
အသည်းကွဲနေသူတွေကို မျက်ရည်မခိုင်ဖြစ်သွားစေတဲ့ နီနီခင်ဇော်ရဲ့သီချင်းအသစ် အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ အမိုက်စားသီချင်းတွေကို သီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး နီနီခင်ဇော်ကတော့ အမြဲလိုလို သီချင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေသူတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ နီနီက ပရိသတ်တွေရင်ကို ထိရှသွားစေမယ့် အသည်းကွဲသီချင်းအသစ်လေးတစ်ပုဒ်ကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဝေမျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲထားသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကို ထိထိမိမိ […]
H1N1 ကူးစက်မြန်..ပြင်းထန် တုပ်ကွေး အဆုတ်ရောင်ရောဂါ လက္ခဏာ နှင့် ကာကွယ်နည်း.
H1N1 ကူးစက်မြန်..ပြင်းထန် တုပ်ကွေး အဆုတ်ရောင်ရောဂါ လက္ခဏာ နှင့် ကာကွယ်နည်း. လေမှ တစ်ဆင့် ကူစက်သော ကူးစက်မြန် ပြင်းထန် အဆုတ်ရောင် H1N1 တုတ်ကွေး Flu Virus (Swine Flu) ရောဂါပိုး တွေ့နေပြီလို့သိရပါတယ်။ အထူးသတိပြုဖို့လို့ လိုအပ်ပါတယ်။ H1N1 […]
ယောက်ျားလေးများ ယူသင့်သော မိန်းမ (၁၀) မျိုး (၁)အနာရောဂါကင်းရှင်းပြီး အနေအထိုင်သိမ်မွေ့ သန့်ရှင်းသော မိန်းမ (၂)မိဘအား ပြုစုလုပ်ကျွေးလိုစိတ်ရှိပြီး ကိုယ့်ထက်အကြီးများအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အငယ်များအား အရာရာနားလည် ထိန်းကျောင်းပေးတတ်သော မိန်းမ (၃)ပုံမှန်အားဖြင့် ယောကျာ်းဆို စိတ်မ၀င်စားတတ်.. ကိုယ်နဲ့တွေ့မှ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း […]
ဝေဠုကျော်က တဏှာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် အရမ်းဝါသနာပါတယ်လို့ အသံဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဟလာတဲ့ သင်းသင်း
ဝေဠုကျော်က တဏှာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် အရမ်းဝါသနာပါတယ်လို့ အသံဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖွင့်ဟလာတဲ့ သင်းသင်း ဝေဠုကျော်နဲ့ သင်းသင်းတို့ဟာ လက်ရှိမှာ အမှုရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဝေဠုကျော်ကို သင်းသင်းကတရားဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး အတူနေစဉ်ဖမ်းယူထားတဲ့ အသံဖိုင်ကိုလည်းတရားရုံးကို တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသံဖိုင်ကို ဝေဠုကျော်ကသွင်းထားခိုင်းတာဖြစ်ပြီးသူဟာ တဏှာနဲ့ပတ်သက်ရင် အင်မတန်ကြီးကြောင်း ယခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။ “သင်းသင်းက ပါးစပ်ပြောလည်း မဟုတ်ပါဘူး လေလည်း […]
ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးချောကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း
ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဇနီးချောကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခဲ့တဲ့ ခင်ပွန်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တက်ကီယိုစီရင်စု၊ ဘာတီခရိုင်၊ Trapeang Sab မြို့ငယ်လေးမှာ အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ဇနီးဖြစ်သူကို အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ခဲ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်မှာ ခင်ပွန်းက ဇနီးသည် ဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားရဲ့နာမည်ကတော့ Prum […]
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးအ​​​နေနဲ့ နှလုံးမရှိဘဲ အသက်​ရှင်​သန်​​နေသူ
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးအ​​​နေနဲ့ နှလုံးမရှိဘဲ အသက်​ရှင်​သန်​​နေသူ အသက်​ ၅၅ နှစ်​အရွယ်​ ခရိတ်​ခ်​လူးဝစ္စဟာ amyloidosis လို့​ခေါ်တဲ့ နှလုံး​ရောဂါတစ်​မျိုးကို ခံစားရပြီး အသက်​အန္တရာယ်​ပါစိုးထိတ်​ရတဲ့ အ​ခြေအ​နေပါ။ Amyloidosis ဆိုတာ ရိုးတွင်းချဉ်​ဆီထဲမှာ ပုံမှန်​မဟုတ်​တဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်​တစ်​မျိုးထွက်​ရှိလာပြီး သူ့ရဲ့အညစ်​အ​ကြေးအဆိပ်ဓာတ်​​တွေဟာ နှလုံးမှာသွား​ရောက်​စုပုံ​နေတာမျိုးပါ။ သူ့ကို တက္ကဆက်​နှလုံး​ဆေးရုံမှာ ကုသခဲ့ရာမှာ​တော့ ​ဒေါက်​တာဘီလီကွန်းနဲ့ […]
အသံဖိုင်ကို ကျွန်တော် ဖမ်းခိုင်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ဝေဠုကျော်
အသံဖိုင်ကို ကျွန်တော် ဖမ်းခိုင်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ဝေဠုကျော် ကာမ လိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ(၄၀၇) နဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ ဝေဠုကျော်က ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းကို တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သင်းသင်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ ရုံးချိန်း အခြေအနေကို သင်းသင်းက မီဒီယာ […]
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေကို Public Area မှာ သေဒဏ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေ
သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေကို Public Area မှာ သေဒဏ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေ အေသင်ချိုဆွေဟာ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေအတွက် ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်စေမယ့် ပြစ်ဒဏ်မျိုးကို ချစေချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူကုိုယ်တိုင်ကလည်း သမီးတစ်ယောက်အမေဖြစ်တာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေအပေါ် ဒေါသဖြစ်မိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အေသင်ချိုဆွေက သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါသထွက်သလို ဝမ်းလည်း […]